စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: ရပ်တန့်ခဲ့သော ရင်ခုန်သံ
ကော်ဖီသောက်လျင် ရင်တုန်တတ်သည်ဟု ကြားဖူးသည်
လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် သောက်နေဆဲအချိန်တွင် ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်တန့်ခဲ့ရသည်….
သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်က အပြုံးတွေက လန်းဆတ်တက်ကြွလွန်းနေသည်.
သူ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကပါ လိုက်ပြုံးနေတာကို ကြည့်ရင်း ကျမရဲ့ နှလုံးခုန်သံတွေက တဖြည်းဖြည်း တိုးတိတ်လာခဲ့သည်. ကြိုတင်သိနှင့်နေပီးဖြစ်ပေမဲ့ သူ့ဆီက စကားလုံးတွေကိုကြားရဖို့ ကျမက အသက်ရှုသံကိုပါ ရပ်တန့်ထားခဲ့သည်.
ကျမက စိတ်မြန်သူပီပီ ကျမရှေ့က သူ့အတွက် လက်ဖက်ရည်ခွက်ကို သူ့ဘက်ကို တွန်းပို့ပေးလိုက်သည်.
“ကဲ ဆိုပါဦး… အခြေအနေ”
ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပဲပေါ့ ဒီလို အပြုံးမျိုးလေ….
ပါးနပ်သည်လို့ ဆိုရမယ့် ကျမက သူ ဖွင့်မပြောမီကပင် ဘာကိုပြောချင်နေတယ်ဆိုတာကို ကြိုခန့်မှန်းမိနေခဲ့သည်.
သူ့ဆီက သူပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေက ဘာအတွက်ဆိုတာကို မျှော်လင့်ထားနေရင်းနဲ့တောင် ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ ရင်ခုန်သံတွေတင်မကပါ အသက်ရှုနှုန်းတွေပါ ရပ်တန့်သွားတဲ့အထိ နာကျင်ခဲ့ရသည်. ကျမ အသည်း ဟက်တက်ကွဲခဲ့လေသည်. အသည်းနှလုံး ကွဲအက်လျင် ထွက်လာတတ်သည့် သွေးစိမ်းရှင်ရှင်တွေသည် လည်ချောင်းဝမှတစ်ဆင့် နှုတ်ခမ်းဖျားမှ ယိုစိမ့်ကာ လက်ဖက်ရည်ခွက်ထဲ စိမ့်ကျခဲ့သည် ထင်သည်. လက်ဖက်ခြောက်အရောင်က နီလွန်းနေခဲ့သည်.
“သူ့ကို ဖွင့်ပြောဖို့ ငါ သွေးမနည်းပါဘူးဟာ. ဒါပေမဲ့ နင်တို့က သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့…..
နောက်ပီး နင်က… ဟုတ်တယ် ဒီစကားကို ပထမဆုံးဖွင့်ပြောတာ နင့်ကိုပဲ.
တခြားဘယ်သူတွေမှ မသိကြဘူး. ငါ ဒီထက် ကြာရှည်တင်းမထားနိုင်ဘူးဟာ….
နင့်ကို ဖွင့်ပြောတယ်ဆိုတာက….. ငါ ခံစားရသမျှကို နားလည်ပေးနိုင်တာက နင်ပဲ ရှိတယ်လေ.”
စကားလုံးတွေရဲ့ ချည်နှောင်မှုအောက်မှာ ကျမက ဟန်ဆောင်ကောင်းခဲ့သည်.
သူ့ရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားတွေက ကျမအတွက်တော့ တစ်စတစ်စ ရင်ကွဲအက်လာခဲ့တာကို သူ တကယ် မသိခဲ့ပါ.
သူ စကားတွေ အများကြီး ပြောခဲ့သည်. အဲ့သည် စကားလုံးတွေထဲမှာ သူမအပေါ် ချစ်ခြင်း
သူမအပေါ် သူ့ရဲ့ မြတ်နိုးမှု သူမအပေါ် သူ့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက် သူမအပေါ် သူ့ရဲ့ …. သူ့ရဲ့……………..
သူက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိတ်တော့မှာကိုတောင် သတိမမူမိလောက်အောင် ကျမကို ရင်ဖွင့်စကားတွေ အများကြီးပြောနေခဲ့သည်. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိတ်နေခဲ့ပီး နောက်ဆုံး ကျမတို့ စားပွဲတစ်ခုတည်း ကျန်တော့တဲ့အချိန်မှ သူက ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုရော အချိန်နာရီတွေကိုပါ သတိထားမိခဲ့တာ ဖြစ်သည်.
“ဟာ နင် အိမ်ပြန်ဖို့ နောက်ကျနေပီ ငါ ပြန်လိုက်ပို့မယ်….”
“မလိုပါဘူးဟာ လမ်းတွေက တစ်လမ်းစီပဲဟာကို….
နောက်ပီး မလိုပါဘူး ငါ ပြန်နေကျပါ …
ဟုတ်တယ် ……ငါတစ်ယောက်တည်း ပြန်နေကျပဲ …. တော်ကြာ အဖော်လိုချင်နေမှဖြင့်ဟာ…..
ငါ့ဘာသာ အေးဆေးနေပါရစေ ထူးရယ်…….”
ကျမက တကယ့်ကို သူ့ကို ရယ်သွမ်းသွေးလိုက်ပေမဲ့ သူက ကျမရဲ့ စကားလုံးတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့သည်.
ကျမတို့နှစ်ယောက် ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို လမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့အချိန်အတွင်း သူ့ဆီက စကားတစ်ခွန်းမှ ထွက်မလာခဲ့ပါ. မီးရောင်မှိန်မှိန်အောက်မှာ သူ ဘာစဉ်းစားနေသလဲ မသိသလို ကျမ ဘယ်လို ခံစားနေရသလဲ လဲ သူ မသိနိုင်ခဲ့ပါ.
ကျမ စီးရမယ့်ကား လာနေတဲ့အထိ သူက တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်.
“ငါသွားပီ ထူးရေ… နင်လဲ မိုးမချုပ်စေနဲ့ဦးနော်. ငါ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို စဉ်းစားလာခဲ့မယ်လေ နော် …
ဟုတ်ပီလား ဘိုင့်ဘိုင့် ဆီးယူ နောက်မောနင်း …..”
စသည်ဖြင့် ကျမက ပါးစပ်ထဲက ပေါက်ကရ စကားလုံးတွေ ဟစ်အော်ရင်း လူကျပ်နေတဲ့ ကားပေါ်ကို အတင်းတိုးတက်ခဲ့သည်.
ကားအောက်မှ သူလက်ပြနေတာကို ခပ်ဝါးဝါးမြင်ရတော့မှ ကျမ မျက်ရည် ကျနေမှန်း သိရသည်.
ကျမတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းအုပ်စုလေးထဲမှာ မိန်းကလေး ၅ ယောက် ယောကျာ်းလေး ၃ ယောက် ရှိသည်.
အဲ့သည့်အထဲမှာ ထူးက ကျမအတွက်တော့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းလေးပင်.
ကျမ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် စကားပြောလျင် ချစ်မြတ်နိုးစွာကြည့်တတ်တဲ့ သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကို ကျမ သိပ်နှစ်သက်ခဲ့သည်. ကျမအတွက်လို့ အမြဲ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ သူ့ရဲ့အကြင်နာတွေအပေါ် ကျမ နှစ်ခြိုက်ခဲ့သည်. မသိတဲ့လူတွေအတွက်တော့ မျက်နှာကြောမာသလောက် ကျမရဲ့ သူငယ်ချင်းလေးတွေအတွက်တော့ ကျမက ဂျိုကာပင်.
ကျမ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ ကျမ တိတ်တခိုးထားခဲ့တဲ့ သူ့အပေါ် ချစ်ခြင်း ကျမရဲ့ ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်းလေး. ကောင်းပီ
သူပျော်ရွှင်နေတာကိုသာ ကျမက အစဉ်အမြဲ ကြည့်လိုခဲ့သည်.
သူ သိပ်ချစ်နေတဲ့ မိန်းကလေးကရော…
သူမကိုလဲ ကျမ သိပ်ခင်သည်. သူမရဲ့ အေးဆေးတဲ့အပြုံးနဲ့ စကားသံချိုချို
တည်ငြိမ်လှတဲ့ သူမရဲ့ အနေအထိုင်တွေက သူနဲ့တကယ့်ကို လိုက်ဖက်လှပါသည်.
သူမကို ချစ်သည့် သူ ကံကောင်းသလို သူ သိပ်ချစ်တဲ့အတွက်လဲ သူမ ကံကောင်းလှပါသည်.
ကဲ ဒါဆိုရင် ကံဆိုးသွားတာက ဘယ်သူလဲ……
အောင်သွယ်သည် အခန့်မသင့်လျင် ဗီလိန်ဖြစ်သွားနိုင်သလို ဇာတ်ကောင်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်.
ဒါပေမဲ့ ကျမကတော့ ဘာတစ်ခုမှ မဖြစ်ချင်ခဲ့တော့ပါ.
ကျမအတွက် မဟုတ်သည့် ချစ်ခြင်းအတွက် ကျမက ဘာကိုမှ မလိုချင်တော့ပါ.
စည်းဘောင်ကျော်ကာ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့မိတဲ့ ကျမကိုယ်တိုင်မှာပဲ အပြစ်ရှိခဲ့ပါသည်.
ဘယ်သူမှ မသိခဲ့တဲ့ အချစ်အတွက် ဘယ်သူမှ မသိလိုက်တဲ့ အသည်းကွဲမှု အတွက် ကံဆိုးသူပါလားဟု စာနာစရာ မရှိရပါ.
ကျမက သူတို့ ရင်ဖွင့်သမျှ နားထောင်ပေးသည့် ရင်ဖွင့်စရာ ဟစ်တိုင်သာလုပ်ခဲ့သည်.
သူတို့ရဲ့ အသည်းနှလုံးတွေကို ပိုပိုပီး နီးကပ်လာအောင်
သူတို့ရင်ထဲက စကားလုံးတွေ ပွင့်ထွက်လာအောင် ကျမက နားထောင်သမားလုပ်ပေးခဲ့သည်.
အတင်းတိုက်တွန်းတာ အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့တာ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ပေးခဲ့ပါ.
တကယ်တော့ မလိုအပ်ပါ. ချစ်သူတွေဖြစ်ဖို့ဆိုလျင် ဘေးပယောဂ မပါဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်.
သူတို့အတွက် လိုအပ်သည်က ယုံကြည်ရသည့် ရင်ဖွင့်ဖော်ပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်.
အခြေအနေတွေက ထင်ထားတာတွေထက်ပင် ပို အဆင်ပြေနေခဲ့သည်.
သူတို့နှစ်ယောက် တရားဝင်ချစ်သူတွေ မဖြစ်ကြသေးပေမဲ့ သူငယ်ချင်းအုပ်စုထဲမှာ အတွဲတစ်တွဲအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခဲ့ကြသည်.
သူမကလဲ အပြင်းအထန် ငြင်းဆန်မှု မလုပ်ခဲ့ပါ. ပရိုပို့စ်လုပ်ခဲ့ပီးပေမဲ့ သူမက အဖြေမပေးသေးဘဲ အလေးအနက် စဉ်းစားနေခဲ့သည်.
သည်အချိန်အတွင်းမှာ ဆောက်တည်ရာမရ ခံစားနေသူက ကိုထူးသာ ဖြစ်သည်.
သူ အလူးအလဲ ခံစားနေရတာကို ကြည့်ပီး ကျမ အမှန်တကယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်.
တစ်နည်းဆိုလျင် ကျမလဲ သူနှင့်ထပ်တူ အသည်းကွဲနေခဲ့တာဖြစ်သည်.
တမင်တကာ ကျမ ခွင့်ရက်ရှည်ယူပီး သူတို့ကြားထဲက ရှောင်ထွက်ပေးခဲ့သည်.
ဒီကြားထဲက သတင်းတွေလဲ ကျမ မကြားရအောင် နေခဲ့သည်.
သူတို့နှစ်ဦးအတွက် ကျမတတ်နိုင်တာထက်ကို အစွမ်းကုန် ကူညီပေးခဲ့ပီးပီ.
အခုကိစသည် သူနှဲ့ သူမရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ ဖြစ်နေခဲ့ပီ.
ကျမ တာဝန်ပြီးဆုံးခဲ့ပီဟု ကျမက ယူဆနေခဲ့မိသည်.
ကျမရဲ့ အသည်းနှလုံးအတွက် ကုစားမှုလဲ လုပ်ရဦးမည် ဖြစ်သည်.
ကျမအသည်းက အပြင်မှာ မကွဲသလို ဟန်ဆောင်နေနိုင်ပေမဲ့ အတွင်းမှာတော့ ပြန်ဆက်လို့မရအောင် တစ်စစီဖြစ်နေခဲ့ပီ.
မိုးချုပ်နေပီ ဖြစ်သော်လဲ ဖုန်းလာသည့်အတွက် ကျမ အံ့အားသင့်ခဲ့သည်.
ကျမ ထွက်လာခဲ့မယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တော့ ကျမ မသွားချင်တော့ပါ.
ဒါပေမဲ့ ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျမ အင်မတန်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်.
သူ ကျမကို စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာတောင် မတ်မတ်မရပ်နိုင်ခဲ့ပါ. သူ့ရဲ့ မျက်လုံးကနေ ရစ်ဝဲလာတဲ့ မျက်ရည်ကြည်တွေကို ကျမက ရင်နာနာနဲ့ စိုက်ကြည့်နေခဲ့သည်.
သူမရဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ အငြင်းအတွက် သူတကယ်ကို ရင်ကွဲအက်နေခဲ့သည်.
အရက်အမူးသောက်ပီး အသည်းကွဲခြင်းကို ကုစားဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပေမဲ့
သူ့စိတ်ကူးထဲမှာ အရင်ဆုံး သတိရခဲ့သူမှာ ကျမ ဖြစ်နေခဲ့သည်တဲ့လေ.
ကျမသာ သူ့ရဲ့ ရင်ကွဲနာကို လျော့ပါးအောင် လုပ်နိုင်သည်လို့ သူက ယုံကြည်နေခဲ့သည်.
ကျမတို့နှစ်ယောက် လေးဖြူရဲ့ အိပ်မက်ကဗျာ သီချင်းကို တိုးတိုးလေးဖွင့်ထားသည့် မီးရောင်မှိန်မှိန် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွင် ငြိမ်သက်စွာ ထိုင်နေခဲ့သည်.
သူ့ရဲ့ စကားသံတွေက အဝေးကြီးက လာနေသလိုပင် တိုးသဲ့လွန်းလှသည်.
“ဘာအပြစ်မှ မရှိပါဘူးတဲ့ တကယ်တမ်း ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် သူ့ဆီမှာပဲတဲ့….
မချစ်နိုင်ဘူးတဲ့ ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့တဲ့ဟာ…… ငါ တကယ် မခံစားနိုင်ဘူး… ငါ ရူးသွားချင်တယ်…
သူ ငါ့ကို ချစ်နေတယ် ငါသိတယ် ယုရယ်…. ဒါပေမဲ့ ငါ မသိတာက သူဘာလို့ ငါ့ကို မချစ်နိုင်ဘူးလို့ ငြင်းရတာလဲ…”
အဲ့သည့်ညက ကြယ်တွေ သိပ်လင်းလွန်းနေခဲ့သည်. ကျမက သူ့ကို နှစ်သိမ့်ဖို့ စကားလုံးတွေ ရှာနေခဲ့ပေမဲ့ နှုတ်ခမ်းဖျားက တစ်ခွန်းမှ ထွက်မလာခဲ့ပါ. သူ့ရဲ့စက်ဘီးနောက်မှာ ထိုင်လိုက်ရင်း သူ့ရဲ့ ကျောပြင်မှာ ပါးအပ်ထားမိခဲ့သည်. သူ့ရဲ့ ကြေကွဲမှုအတွက် ကျမမှာ တာဝန်ရှိပါသည်. သူတို့နှစ်ယောက်ကို အဆုံးအထိ လက်တွဲနိုင်အောင်လုပ်နိုင်သူမှာ ကျမသာ ဖြစ်ရမည်လေ. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားတွေကို နားထောင်ခဲ့ရသူသည် ကျမသာ ဖြစ်သည်. ဒီအချိန်အထိရောက်မှတော့ ရှောင်လွှဲနေသည်မှာ သရဲဘောကြောင်ရာ ရောက်သည်.
သူမမှာ စဉ်းစားငဲ့ညှာစရာ ဘာရှိသလဲ အရင်ဆုံးသိအောင် လုပ်ခဲ့ရသည်.
သူမက ကျမရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ဖတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေသည်တဲ့လေ.
ရယ်ချင်စရာပါ.. ဗလာမျက်လုံးမျိုးမှာ ဘယ်လို ခံစားချက်မျိုးရှိနိုင်မှာလဲကွယ်.
ဟန်ဆောင်စကားတွေကို စိတ်အရင်းအတိုင်း ပြောဆိုပီးသည့် နောက်မှာတော့…………….
သူ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေရော နှုတ်ခမ်းတွေကပါ ပြုံးနေခဲ့သည်.
သူ့ရဲ့ အပြုံးက လက်ဖက်ရည်ခွက်တွေထဲကိုပင် စီးဝင်နေခဲ့သည် ထင်သည်.
လက်ဖက်ရည်သည် ချိုစိမ့်မဟုတ်ဘဲ ချိုမြနေခဲ့သည်.
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လက်တွေ ခိုင်ခိုင်မြဲပါစေလို့ ကျမ တကယ့်ကို ဆုတောင်းပေးခဲ့သည်.
အဲ့သည့်နေ့က လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် သောက်နေဆဲအချိန်တွင် ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်တန့်ခဲ့ရသည်.
ပြည့်စုံ (၆း၂၂ pm, သောကြာနေ့ ၂၀၀၉ မေလ)
at 8:15 AM Labels: စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်
ဧရာဝတီသား August 1, 2009 at 9:29 AM
အော် ဖတ်ဖူးသလိုလိုဖြစ်နေ ပါလားလို့၊ ဟုတ်ပ ဖတ်ဖူးပြီးသားကိုး၊
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးအသား ကောင်း၏။
jr.လွင်ဦး August 1, 2009 at 9:59 AM
ယောက်ျားလေးတွေက ကိုယ့်ကို ကြိုက်တာမသိတဲ့ကောင် ဘယ်ကောင်မှ မရှိဘူး။ ဒါသက်သက် ဒုက္ခပေးတာ။ ခံနဲ့။ :D
Angel Shaper August 1, 2009 at 10:04 AM
ရင်ထဲ ဘယ်လိုကြီး ဖြစ်သွားလဲ မသိပါဘူး။
ကြေကြေကွဲကွဲ ကြီးကို ရင်ခုန်သံတွေ တုံ့ဆိုင်းသွားပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတဲ့ အရေးအသားလေးတွေ အတွက် အားကျမိပါတယ်။
ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်တန့်သွားသည့်တိုင် ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
ကျနော် လည်း ကော်ဖီသောက်ရင်း ရင်ခုန်သံတွေ ရပ်တန့်သွားပြီဗျို့
rose of sharon August 1, 2009 at 6:28 PM
မြစ်ကျိုးအင်း August 1, 2009 at 10:13 PM
ဖြစ်ရပ်မှန်တော့ မဟုတ်ဘူးထင်ပေမယ့် စာအရေးအသားကောင်းတော့
မျောပါသွားမိတယ်...။ဘ၀တွေက စုံတယ်လေ ဒီတော့ အဖြစ်အပျက် မျိုးစုံ